[Sunday, April 15th, 18] :: Waxyaabaha U Qabsoomay Xukuumadda Madaxweyne Muuse Biixi 120-kii Maalmood Ee U Horreeyey
Hargeysa(RH)Xukuumadda Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo shaqadeeda bilowday 13-kii December 2017, ayaa shaacisay waxqabadka u qabsoomay muddadii 120ka maalmood ee u horreeyey xilkeeda oo ku beegnayd 12-kii April 2018.
1.	Safarradii Madaxweynaha Somaliland ku tagay dalalka sida Imaaraadka, Itoobiya iyo Jabuuti waxa ka dhashay inuu kor u kaco meeqaamka diblumaasiyadda Somaliland, iyadoo dawladda Isu-tagga Imaaraadka Carabtu aqoonsatay Baasaboorka Somaliland.
2.	Waxa la dardargeliyey fulinta heshiisyadii Somaliland la gashay Imaaraadka ee ku saabsanaa ballaadhinta iyo casriyeynta Dekedda Berbera iyo mashaariicda kale ee wehelinaysay.
3.	Waxa la toosiyey nidaamka maamulka iyo haykalka dawladnimo, iyadoo wax ka beddel lagu sameeyey hannaanka shaqo ee masuuliyiinta iyo shaqaalahaba.
4.	Buugaagta ardaydu wax ka barato ee fasallada Hoose/dhexe ee dugsiyada Dawladda ayaa bilaash laga dhigay, iyadoo xukuumaddu dusha u ridatay kharashka ku baxa oo ah lacag dhan 1.2 bilyan Shillinka Somaliland.
5.	Waxa la bilaabay hirgelinta barmaamijka shaqo Qaran oo lagu hawlgelinayo dhallinyarada reer Somaliland ee waxbaratay, kaas oo loo sameeyey xisaab-socod (Account) u gaar ah loogu shubo lacag dhan hal bilyan oo shillinka Somaliland bil kasta laga soo bilaabo January 2018, si sannadka dhammaadkiisa loo helo lacag 12 bilyan SL.SH oo lagu bilaabo barmaamijkan shaqo. Waxa kaloo la sameeyey Sanduuqa Horumarinta Dhallinyarada Somaliland oo Madaxweyne Muuse Biixi uu ku shubay kaalmadii u horreysay oo dhamayd laba bilyan oo shillinka Somaliland oo u dhiganta $200,000,000.
6.	Odoraska Miisaaniyad-sannadeedka Qaranka Somaliland ee sannadka 2018-ka oo dhawaan ay ansixiyeen Golaha Wakiilladdu, cadadkeeduna dhanyahay; hal tiriliyan, lix boqol iyo sideetan iyo toddoba bilyan oo Shilinka Soomaliland ah (1687,0000,000,000), una dhiganta Laba boqol iyo Kow iyo Sideetan Malyuun oo Dollar (281,000,000 US), ayaa boqolkiiba 34% ka mid ah ay xukuumaddu u qoondaysay dhinaca horumarinta, waxaanna mushaharka loogu kordhiyey macallimiinta dawladda iyo ciidammada kala duwan ee Qaranka.
7.	Muddadii 120ka maalmood ahayd waxa xukuumaddu dib-u-hawlgelisay 42 goobood oo kuwa caafimaadka ah oo ku kala yaala dhammaan gobollada dalka.
8.	Xukuumaddu waxay bilowday kobcinta wax-soo-saarka dalka, gaar ahaan dhanka beeraha oo ay masuuliyad iska saartay inay u qodo dhulka dadka danyarta ah in ka badan 16 kun oo saacadood, iyadoo xukuumaddu lafteeduna qodonaysa dhul-beereed gaar u ah.
9.	Waxyaabaha kale ee waxqabadka xukuumaddu baahisay ku jira waxa ka mid ah ku dhaw 50 ceel biyood oo isugu jira riigag la qoday iyo ceelasha gaagaaban oo ku shaqaynaya tamarta caddeeda laga dhaliyo, ayaa Wasaaradda Khayraadka Biyuhu muddadaa kooban ku hirgelisay, qaarkoodna la wareegtay, iyadoo kaashanaysa dawladaha taageera Somaliland iyo qaar ka mid ah hay’adaha ku sugan dalka ee ka shaqeeya arrimaha biyaha.
10.	Waxa la dhammaystiray diiwaangelinta dhammaan shaqaalaha dawladda ee guud ahaan gobollada iyo degmooyinka Jamhuuriyadda Somaliland, taas oo qayb ka ah barmaamijka tayeynta iyo tira-koobka shaqaalaha iyo shaqada dawladda, iyadoo sidoo kalena ay jirtay in Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland digreeto ku amray in haweenka kooto laga siiyo nidaamka shaqaalaynta dawladda.
11.	Waxa markii u horreysay la diiwaangeliyey tirada shaqaalaha ajnebiga ah ee ka shaqaysta gudaha Somaliland, si loo qiimeeyo shaqooyinka muwaadiniintu qaban karaan ee ay hayaan ajaanibku.
12.	Si loo xafido khayraadka dalka xukuumaddu waxay kala noqotay ruqsadihii ay haysteen kalluumaysatadii Shisheeye ee ku sugnaa badda Somaliland, tallaabaddaas oo ay si ballaadhan u soo dhaweeyeen Kalluumaysatada waddaniga ahi, taas oo faa’iido weyna ay ka heleen, isla markaana laga dareemay suuqyada magaalooyinka waaweyn xaddiga Kalluunka ee soo galaya. Waxa kaloo la daweeyey xoolo nool oo tiradoodu gaadhayso 53,752 neef oo isugu jira Geel, Adhi iyo Lo’.
13.	Waxa xukuumaddu saxeexday heshiis cusub oo shirkado caalami ahi sahamin shidaal ay kaga samaynayaan deegaamo ka tirsan Gobolka Saaxil.
14.	Xukuumaddu waxay xil weyn iska saartay hagaajinta amniga gudaha iyo sugidda xuduudaha dalka, iyadoo ciidanka Qaranka Somaliland oo gacan ka helaya shacab-weynaha Gobolka Sool ay ku durkeen xuduudka dhanka bari, iyagoo fadhiisimo cusub ka samaystay deegaamada Tuko-raq iyo Boocame.